Labaatan iyo laba reer Iowans ah ayaa u dhintey dhibaatooyinka COVID-19 | KWIT
Labaatan iyo laba reer Iowans ah ayaa u dhintey dhibaatooyinka COVID-19
By Halima Osman • Oct 28, 2020
Labaatan iyo laba reer Iowans ah ayaa u dhintey dhibaatooyinka COVID-19 24-kii saac ee la soo dhaafey, iyadoo ku dhowaad 1,200 kiisas cusub la soo sheegey.
Heerka waxtarka ee imtixaanka gobolka inta lagu jiro mudadaas wuxuu ahaa 12.5%. Qiimaha 14-maalmood waa 10.6%.
Lix iyo toban degmo ayaa leh 14-maalmood qiime wax ku ool ah oo ka sarreeya heerka 15%. Heerkaasi waa hal shuruud oo degmo dugsiyeedku ku dalban karaan barashada khadka tooska ah oo keliya. Degmada Woodbury ayaa ku jirta kaalinta 12-aad ee gobolka iyadoo leh 15.5%.
Fayraska corona ayaa kusii xumaanaya gobolada uu aad ugu baahan yahay madaxweyne Donald Trump.
Taas waxaa ka mid ah Iowa, halkaasoo madaxweyne Trump uu hadda ku jiro tartan kor loogu qaadayo madaxweyne ku xigeenka Joe Biden ka dib markii uu gobolka ku qaaday in ka badan sagaal boqolkiiba dhibco afar sano ka hor.
Madaxweyne Trump ayaa lagu wadaa inuu caawa ka joojiyo ololaha magaalada Omaha, isaga iyo Senatorka Mareykanka Joni Ernst. Xisbiga Jamhuuriga ee Iowa waxa uu wajahayaa loolan aad u dhow oo ka dhan ah haweeneyda Dimuqraadiga Theresa Greenfield.
Madaxweyne ku xigeenkii hore Joe Biden ayaa soo saaray bayaan uu kaga jawaabayo booqashada madaxweynaha. Qeyb ka mid ah waxay leedahay, “Nebraskans way waxyeellayaan Madaxweyne Trump-na wuu ku fashilmayaa. Tirada kiisaska COVID-19 ayaa dhaaftay 60,000 isbitaalada la seexiyayna waxay gaareen heerkii ugu sareeyay isbuucii hore. Toddobada maalmood ee soo socda, waxaad awood u leedahay inaad soo afjarto fowdada iyo kala qaybsanaanta, laakiin waa haddii aad codeyso. ”
Nebraska waxay soo tabisay qiyaastii 700 oo kiis oo cusub iyo 7 dhimasho xalay.
Nidaamka xabsiyada Nebraska wuxuu wali la halgamayaa faafitaanka coronavirus ee maxaabiista iyo shaqaalaha. Websaydhada Waaxda Asluubtu waxay muujineysaa tirada guud ee kiisaska la xaqiijiyey inay kor u dhaafeen 260 tan iyo markii cudurku bilaabmay. Laba maxbuus ayaa dhintay.
Ku dhowaad kalabar maxaabiista ku jirta xarumaha South Dakota waxaa laga helay COVID-19. Jeelka loo yaqaan 'Mike Durfee State Prison' ee kuyaala magaalada Springfield ayaa kiisaska ugu badan lagu arkay 674. Koonfurta South Dakota State Pen waxay aragtay kiisaska labaad ee ugu badan6, laakiin heerka ugu sareeya ee ugu wanaagsan waa 73%.
Heerka shaqo la'aanta ee Iowa bishii Sebtember wuxuu hoos ugu dhacay 4.7%
By Halima Osman • Oct 21, 2020
Heerka shaqo la'aanta ee Iowa bishii Sebtember wuxuu hoos ugu dhacay 4.7%, wuxuu sii wadaa isbedelka shanta bilood ee shaqaalaynta kadib markii dhaqaalaha gobolka uu haleelay cudurka faafa ee coronavirus.
Iowa Workforce Development ayaa maanta soo warisay in heerka shaqo la'aanta uu hoos uga dhacay 6% bishii Ogosto. Heerka ayaa hoos u dhacay bil kasta tan iyo bishii Abriil markii shaqo la'aanta ay gaartay heerka ugu sareeya Iowa.
Heerka shaqo la'aanta Mareykanka ee bishii Sebtember wuxuu ahaa 7.9%.
Kiisaska Coronavirus waxay kusii kordhayaan Iowa iyo Siouxland.
Saraakiisha caafimaadka ee maxalliga ah ayaa sheegaya in Gobolka Woodbury
By Halima Osman • Oct 20, 2020
Saraakiisha caafimaadka ee maxalliga ah ayaa sheegaya in Gobolka Woodbury uu sii wado inuu arko tiro aad u tiro badan oo ah kiisaska COVID-19. Waxaa jirey ku dhowaad 6,800 xaaladood tan iyo bilowgii cudurka safka. Waxaa jiray 174 kiis oo wanaagsan oo wanaagsan tan iyo subaxnimadii Jimcaha iyo afar dhimasho kale, oo loogu talagalay tirada dhimashada gobolka ee 89.
Gobolka Nebraska ayaa dib u soo celinaya xayiraadaha qaar ka dib markii ay soo bateen kiisas cusub
By Halima Osman • Oct 16, 2020
Gobolka Nebraska ayaa dib u soo celinaya xayiraadaha qaar ka dib markii ay soo bateen kiisas cusub iyo 40% isbitaal dhigis ka badan kii ugu sarreeyay bishii May. Nebraska waxay ku dartay ku dhowaad 1,000 kiis oo cusub iyo shan dhimasho hal maalin gudaheed.
Badhasaabka Ricketts wuxuu sheegay inay xanuun badan tahay inuu tallaabooyinkan meel dhigo si loo xakameeyo xorriyadda qofka. Laakiin, waxay ahayd lagama maarmaan in la ilaaliyo awoodda isbitaalka.
Maalin gudaheed 1,400 kale oo Iowans ah ayaa laga helay cudurka coronavirus-ka cusub, oo ay ku jiraa
By Halima Osman • Oct 15, 2020
Maalin gudaheed 1,400 kale oo Iowans ah ayaa laga helay cudurka coronavirus-ka cusub, oo ay ku jiraan ku dhowaad 90 oo ka tirsan Gobolka Woodbury. Waxaa jiray 13 dhimasho oo dheeraad ah gobolka oo dhan. Caafimaadka Degmada Siouxland wuxuu soo sheegayaa hal dhimasho oo kale oo ka dhacday Degmada Woodbury, oo ah haweeney waayeel ah, wadar ahaan 82 dhimasho tan iyo bilowgii cudurka faafa.
Isbitaalada ayaa sidoo kale sii kordhayay iyadoo gobolka uu dejiyay heer sare oo cusub oo ah 482 qof oo lagu daaweynayo isbitaalada, iyo 64 labada isbitaal ee Magaalada Sioux.